अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्
नि: शुल्क फ्रान्चाइजी थप्नुहोस्
कपडा लगाउने उत्पादन
खेल मैदानहरूको उत्पादन
घरेलु रसायन उत्पादन
धातु संरचनाहरूको उत्पादन
प्लास्टिक उत्पादनहरूको निर्माण
लचिलो इट्टा उत्पादन
शौचालय कागज निर्माण
सेल्फ-ट्यापिंग स्क्रू उत्पादन
स्वत: रासायनिक वस्तुहरूको निर्माण
खेल पोषण स्टोर
खेलकुद सामान स्टोर
इलेक्ट्रिकल सामान स्टोर
कन्फेसनरहरूको लागि किनमेल गर्नुहोस्
घरेलु उपकरण स्टोर
घरेलु सामान स्टोर
पाल्तु जनावर पसल
माछा मार्ने पसल
माछा मार्ने स्टोर
विनाइल रेकर्ड स्टोर
समुद्री खाना पसल
सेनेटरी इन्जिनियरि shop पसल
स्थिर मूल्य स्टोर
अपार्टमेन्ट को मर्मत
फ्लोर कभरिंग स्टोर
बच्चाहरूको खेल क्लब
बच्चाहरूको पौंडी पोखरी
बच्चाहरूको फुटबल स्कूलहरू
बच्चाहरूको फोटो स्टुडियो
बच्चाहरूको लागि काम गर्नुहोस्
बच्चाहरूको लागि सेवाहरू
बच्चाहरूको शैक्षिक केन्द्र
बच्चाहरूको सडक खाना
मर्मत सेवा केन्द्र
किशोरका लागि क्लब
गेमि club क्लब
इन्स्टाग्राममा अनलाइन कपडा स्टोर
कपडा र जुत्ता स्टोर
पुरुषको कपडा स्टोर
फर कोट पसल
प्रोग्रामिंग को स्कूल
आदेश जारी गर्दै
अटो पार्ट्स स्टोर
कार सामान स्टोर
Andorra ला Vella
फ्रान्कफर्ट म मुख्य हुँ
फ्रान्डेनबर्ग an der रुहर
कागयन डी ओरो
कम्यानेट्स - पोडिल्स्की
मोगिलेभ - पोडोलस्की
Krestovozdvizhenka को गाउँ
Nozhai - Yurt
अलेक्जान्ड्रोभ - गाय
ओबीआईमा ढु stone्गा
औसत अख्तुबा आरपी
प्रिमोर्स्को - अखतरस्क
श्री जयवार्डनपुरा कोट्टे
सेन्ट पीटर्सबर्ग INSERT INTO TBCITES (id, id_tbCountries, नाम, id_tbLangs, sysname) VALUES (USA)
ललोरेट डे मार्च
कुनै प्रारम्भिक एकमुश्त भुक्तानी छैन
लगानी आवश्यक छ $
१०० सम्म न्यूनतम लगानी
२०० भन्दा कम सस्तो फ्रान्चाइजीहरू
कम लागत फ्रन्चाइजीहरू $ 2000 सम्म
Small 4000 अन्तर्गत सानो लगानी
सस्तो uc 10000 सम्म घटाउन योग्य
१००० सम्मको सानो लगानीको साथ फ्रान्चाइज गर्नुहोस्
30000 डलर सम्मको अर्थव्यवस्था फ्रान्चाइजी
सानो कटौती $ 40000 सम्म
व्यापार फ्रेंचाइजीहरू $ 50000 अन्तर्गत सस्तो छन्
१००००० सम्म लगानी संग व्यापार
Ded १०,००० सम्म ठूलो कटौतीयोग्य
१००,००० भन्दा बढी फ्रान्चाइजीहरू
रोयल्टी संग फ्रन्चाइज बिक्री
द्रुत payback संग फ्रन्चाइजी - 1 महिना मा
द्रुत payback फ्रैंचाइजीहरू - १ महिना देखि months महिना
Months महिना देखि १ बर्ष सम्म फ्रैंचाइजीको पेब्याक
फ्रेंचाइजीको पेब्याक अवधि १ बर्ष भन्दा बढि हो
तपाईं बहु मानहरू चयन गर्न सक्नुहुनेछ
सानो शहर, साना बस्ती, सानो शहर
गृह मताधिकार। तपाईं घर बाट काम गर्न सक्नुहुन्छ
जनावरहरूको लागि मताधिकार
लाभदायक, सबैभन्दा लाभदायक फ्रेंचाइजीहरू
फ्रेंचाइजी स्टोर खोल्नुहोस्
सस्तो सामानको पसल
अनलाइन फ्रेंचाइजी, अनलाइन स्टोर
Scratch बाट फ्रान्चाइज
नि: शुल्क मताधिकार
संगठन कति लामो समयदेखि सञ्चालन भइरहेको छ
१ देखि years वर्ष पुरानो
To देखि १० वर्ष पुरानो
.To देखि १० वर्ष पुरानो
ब्रान्ड नाम र विज्ञापन पाठ द्वारा खोज। तपाइँ पनि तपाइँको आफ्नै नोटहरु द्वारा खोज्न सक्नुहुन्छ।
दर्ता वा व्यक्तिगत जानकारी को उपयोग गर्न को लागी लगइन गर्नुहोस्
त्यहाँ एक छाप छ
कुनै चिन्ह छैन
त्यहाँ नोटहरू छन्
कुनै नोट छैन
त्यहाँ एक पत्राचार छ
कुनै पत्राचार छैन
त्यो पत्र हेरिएको थिएन
पत्रको जवाफ दिइयो
पत्रको जवाफ आएन
मेरो लागी नयाँ सन्देशहरु छन्
सबै खोजी मापदण्ड देखाउनुहोस्
विज्ञापनहरू भेटिए: 983
USU - युनिभर्सल लेखा प्रणाली
प्रारम्भिक शुल्क:0$
लगानी आवश्यक छ:0$
रोयल्टी:0$
भुक्तानी महिनाहरूको संख्या: 1
कोटि: कार्यक्रमहरू, लेखा
कुनै पनि प्रकारको व्यवसायका लागि कार्यक्रमहरू! सफ्टवेयर बिना व्यवसाय को लागी एक उद्यम को काम नियन्त्रण गर्न को लागी सम्भव छ र यो गतिविधि को सबै क्षेत्रहरु। हरेक दिन त्यस्तो कम्पनीले ठूलो नोक्सान बेहोर्छ किनकि यसले आफ्ना कमजोरीहरूको विश्लेषण गर्न सक्दैन र तिनीहरूलाई सुधार गर्न सक्दैन। कमजोर लि anything्क केहि पनि हुन सक्दछ: एक अलोकप्रिय वस्तु जुन संगठनले बिक्रीको लागि खरीद गर्न जारी राख्छ; खराब सेवाका कारण अपेक्षित नाफा नपार्ने सेवा; उद्यमका कर्मचारीहरू, जसको काम दक्षता पर्याप्त राम्रो छैन; र अधिक धेरै। तपाईंको देश वा शहर मा हाम्रो प्रतिनिधि बन्नुहोस् र सबैभन्दा घोलक खण्डमा कमाउनुहोस् - व्यापारमा!
त्यहाँ एक भिडियो छ
त्यहाँ फोटोहरू छन्
तपाइँ विस्तृत तथ्या see्क हेर्न प्रीमियम पहुँच किन्न सक्नुहुन्छ
प्रारम्भिक शुल्क: 1300 $
लगानी आवश्यक छ: 9800 $
रोयल्टी: 1 %
भुक्तानी महिनाहरूको संख्या: 8
कोटि: रक्सी, ब्रान्ड स्टोर
बीर मीर रक्सी पसलहरु को एक श्रृंखला हो कि 2010 मा Pivtorg LLC को सहभागिता संग देखा पर्‍यो। विकास मा प्राथमिक कार्य खाना पकाउन र घर का बना बियर, चन्द्रमा र शराब बनाउन को लागी आवश्यक सबै बेच्ने पसलहरु को एक ठूलो पैमाने मा नेटवर्क को निर्माण थियो। फिलहाल, व्यवस्थापन दुई तरिका मा मताधिकार को विकास गर्ने निर्णय - कम्पनी को व्यक्तिगत स्टोर र मताधिकार स्टोर। 2010 को अन्त्य सम्म, बीर मीर पहिले नै 39 व्यक्तिगत स्टोरहरु र 28 फ्रेंचाइजी शाखाहरु थिए र रक्सी बजार मा लोकप्रियता हासिल गर्न जारी राखे। श्रृंखला को सफलता बियर प्रेमीहरु को लागी उनीहरुको आफ्नै ब्रुवरीहरु बाट फिल्टर गरीएको छैन को लागी एक विशेष प्रस्ताव मा छ। चाँडै, 2013 द्वारा, शाखाहरु को संख्या पहिले नै एक सय भन्दा माथि गयो, र स्टोरहरु आफैं मा सामान को एक विस्तृत वर्गीकरण थियो। रक्सी को मजबूत प्रकार, ड्राफ्ट र बोतलबंद शराब, विभिन्न नाश्ता, सुशी र ग्रिल ट्याप मा बियर मा थपिएको थियो। विकास को लागी मुख्य लक्ष्य बियर पेय पिउने को एक अद्वितीय संस्कृति को निर्माण हो। यो विस्तार मा आधारित छ
WOKA एशिया खाना
प्रारम्भिक शुल्क: 5000 $
लगानी आवश्यक छ: 7000 $
रोयल्टी:2%
कोटि: भान्छा, एक रेस्टुरेन्ट
WOKA एशिया खाद्य श्रृंखला, पहिले नै युक्रेन मा परिचित, सफलतापूर्वक लोकप्रिय र प्यान-एशियाई व्यंजन तयार गर्न को लागी एक परियोजना लागू गरीएको छ। बर्तन एशियाई खाना को सबै परम्पराहरु संग अनुपालन मा तैयार गरीएको छ, एकै समयमा, हामी युक्रेनियन को आवश्यकताहरु र इच्छाहरु लाई उनीहरु लाई अनुकूल गर्न सक्षम थिए। कम्पनीको शेफ थाईल्याण्ड, जापान, चीन जस्ता देशहरु बाट व्यञ्जनहरु स्कलन। हाम्रो सञ्जाल को स्वामी अद्भुत चटनी कि एक विशेष नाजुक aftertaste छोड्नुहोस्। मुख्य मेनुमा रोलहरु घरेलु उपभोक्ताहरु को बीच मा परिचित छन्। प्रस्तावित व्यंजन को वर्गीकरण खाता मा प्रत्येक व्यक्तिगत बिन्दु र यसको स्थान को peculiarities लिँदै, परिवर्तन गर्न सकिन्छ। विशेष गरी ब्राण्ड को बारे मा आकर्षक छ कि यो बजार को मध्य मूल्य खण्ड को लागी डिजाइन गरीएको हो। ब्यापार सफलतापूर्वक कठिन संकट को स्थिति मा विकास गर्न सक्नुहुन्छ - हामी सानो विवरण को लागी मूल्य -गुणस्तर अनुपात बाहिर काम गर्दछौं। हामी बुझ्छौं कि कसरी सान्दर्भिक स्वस्थ खाना साधारण मानिसहरु को लागी एक सस्तो मूल्य मा आज छ।
प्रारम्भिक शुल्क: 1640 $
लगानी आवश्यक छ: 11900 $
भुक्तानी महिनाहरूको संख्या: 7
कोटि: पाल्तु जनावर पसल, सामानको पसल
पेटबर्ग किफायती पाल्तु पसलहरु को एक नेटवर्क हो। यो सस्तो पाल्तु पसलहरु को एक नेटवर्क हो। कम्पनी को गतिविधि 1997 मा शुरू भयो। आज चेन पश्चिमी साइबेरिया मा पालतू पशु उत्पादनहरु को क्षेत्र मा नेताहरु मध्ये एक हो। Tomsk, Seversk, Asino, Kemerovo, Yurga, Barnaul, Novy Urengoy: स्टोर शहरहरु मा प्रतिनिधित्व गरीन्छ। 2014 देखि - हामी TM Petseven अन्तर्गत fillers र सामान को हाम्रो आफ्नै उत्पादन शुरू र एक अनलाइन स्टोर खोल्यो। २०१५ मा, कम्पनी एक franchising कार्यक्रम शुरू। आज "पेटबर्ग" हो: रिटेल स्टोरहरु को आफ्नै श्रृंखला फ्रेंचाइजी को माध्यम बाट व्यापार को विकास पालतू पशु स्टोर petburg.su पसलहरु को एक उज्ज्वल र यादगार ब्रान्ड सुविधाजनक स्थान किफायती र आरामदायक मूल्यहरु भित्र र बाहिर आधुनिक र उज्यालो डिजाइन क्रेताहरु को लागी उच्च गुणस्तरीय सेवा ठूलो। अचल पाल्तु जनावर आपूर्ति प्रचार र प्रस्ताव छुट कार्ड र उपहार को वर्गीकरण
प्रारम्भिक शुल्क: 44000 $
लगानी आवश्यक छ: 440000 $
रोयल्टी:5%
भुक्तानी महिनाहरूको संख्या: 24
कोटि: क्याफे, एक रेस्टुरेन्ट
एक franchisor के बारे मा जानकारी। हामीले २००० मा हाम्रो पहिलो क्याफे खोलेका थियौं, यसलाई MU-MU भन्दै, यो पहिलो, तर धेरै आत्मविश्वासपूर्ण कदम थियो कि हामीले क्याफेहरुको नेटवर्क खोल्न को लागी कि मूल्यहरु को एक लोकतान्त्रिक ढाँचा मा संचालित र एकै समयमा, भाँडा रेस्टुरेन्ट स्तर अनुरूप, यो एउटा वास्तविक लोक क्याफे छ। फिलहाल, हाम्रो नेटवर्क बिक्री को 43 अंक, यसबाहेक, ती मध्ये7एयरपोर्ट को क्षेत्र मा स्थित छन्, उनीहरु franchising को रूपरेखा भित्र काम गर्दछन्। सफल काम को १ years बर्ष को दौरान मा, हामी अनुभव को एक धन, जो व्यक्तिगत प्रयोगहरु कि सफलता संग मुकुट लगाइएको छ मा आधारित छ संकलन गरीएको छ; हामी भाग्यमानी थियौं, हामीले विचारहरुको एक विशाल संख्या लागू गरीयो र प्रोजेक्ट राम्रो तरिकाले समाप्त गर्यौं, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, मानिसहरु खुसी छन्, उनीहरु राम्रोसँग खुवाइएका छन् र हाम्रो सेवाको कदर गर्छन्। MU-MU एक क्याफे हो जहाँ तपाइँ साँच्चै स्वादिष्ट रूपमा खान सक्नुहुन्छ, यसबाहेक, सम्पूर्ण विशाल परिवार संग, यसको अतिरिक्त, यो ठाउँ साथीहरु र परिचितहरु, पक्कै, सहकर्मीहरु र साथीहरु संग संयुक्त जमघटको लागी हो।
एक फ्रान्चाइजी किन्नुहोस्
फ्रन्चाइजी किन्नको लागि एकदम सरल छ, मुख्य कुरा भनेको तपाईंलाई अनुकूल हुने व्यवसायिक मोडेल रोज्नु। तपाईं फ्रन्चाइजीको साथ तपाईंलाई आवश्यक सबै खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, किनभने एक नियमको रूपमा, तपाईंलाई प्रासंगिक सुरुवात व्यवसाय जानकारीको सम्पूर्ण ब्लकको साथ प्रदान गरिएको छ। फ्रान्चाइजी किन्नको लागि पनि फाइदा हुन्छ किनभने तपाईं यस्तो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ जुन कुनै मार्केटिंग लागत बिना नै लाभको महत्त्वपूर्ण स्तर ल्याउँछ। विक्रेता तपाईंलाई रेकर्ड समयमा पैसा बनाउन सुरु गर्न आवश्यक सबै जानकारी प्रदान गर्दछ। तपाईंले भर्खरै एउटा फ्रान्चाइजी किन्नुपर्दछ र सबै अनुभवहरू रमाईलो गर्नुपर्नेछ जुन अन्य मानिसहरूले बनाएको हो तपाईंले यस व्यवसायमा प्रवेश गर्ने निर्णय गर्नु भन्दा धेरै अघि नै। अवश्य पनि, तपाईले एक फ्रान्चाइजी प्राप्त गर्न आवश्यक छ जुन तपाइँको रुचि र क्षमताहरु को लागी सूट। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं संग एक रेस्टुरेन्ट चेन खोल्न पैसा छैन, त्यसोभए तपाईं फ्रान्चाइजी किन्न सक्नुहुन्न। अवश्य पनि, कम्पनीहरू जसले फ्रान्चाइजी प्राप्त गर्न सम्भावित खरीददारहरूको जाँच गर्ने अवसर प्रदान गर्छन्, र यस प्रक्रियामा गल्तीहरू वास्तवमै विरलै हुन्छन्। यदि तपाईं फ्रान्चाइजी प्राप्त गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाईं फ्रान्चाइजी हुनुहुन्छ, यो व्यवसाय मोडेलको प्रत्यक्ष खरीददार। तपाईं एक उद्यमी बन्न सक्नुहुन्छ र नाम प्रयोग गर्नुहोस् जुन सबैले पहिले नै सुनेका छन्। तपाईं पनि एक तैयार-अवधारणा प्राप्त र एक पूर्ण खाली स्लेटबाट केहि आविष्कार छैन। रसियामा फ्रान्चाइजिंगले लामो समयसम्म लोकप्रियता लिएको छ र २०२१ मा एक व्यवसाय मोडल हो जुन लगानी पछि सजिलो पैसा प्रदान गर्दछ। सबै कुरा यति सजिलो छैन, यद्यपि स्क्र्याचबाट व्यापार आविष्कार गर्नु भन्दा फ्रान्चाइजी किन्नु अझै सजिलो छ। लोगो सिर्जना गर्न लागत बेवास्ता गर्दै, तपाईंको आफ्नै शैली र डिजाइन आविष्कार गर्न आवश्यकतालाई हटाउँदै, सबै तपाईंको व्यवसाय मोडेललाई कमिसन गर्न सजिलो बनाउँदछ। यो पर्याप्त आवश्यक ज्ञान किन्नको लागि पर्याप्त छ र यसलाई छिटो बजेट राजस्वको मात्रा बढाउन प्रयोग गर्दछ।
फ्रान्चाइजी किन्नु भनेको सँधै यो स्थायी रूपमा किन्नु पर्दैन। तपाईं ब्रान्ड प्रयोग गर्न अवसर भाँडा लिन सक्नुहुनेछ र केहि समयको लागि आउने सबै उपकरणहरू। सामान्यतया, फ्रान्चाइजीहरूले एकमुश्त शुल्क तिर्दछन्। एकमुश्त योगदान एक निश्चित प्रकारको उद्यमशीलता गतिविधि प्रयोग गर्ने अवसरको रूपमा बुझिन्थ्यो, पहिले नै अवस्थित व्यापार मोडल, वित्तीय स्रोतहरू कमाउनको लागि। तपाईं तपाईंको तर्फबाट कार्य गर्न सक्नुहुन्छ, अवस्थित टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न, कच्चा मालले खपत गर्न, र ट्रेडमार्क वा ब्रान्ड लागू गर्न सक्नुहुन्छ। यो लगभग कुनै पनि ठाउँमा र कुनै पनि देश मा राम्रो राम्रो काम गर्दछ। जे होस्, तपाई जहिले पनि फ्रन्चाइजी किन्न र तपाईको क्षेत्रमा यसलाई प्रमोट गर्न सक्षम हुनुहुन्न। स्थानीय वातावरणमा यस ब्रान्ड र व्यापार मोडेलको सञ्चालनको सम्भावनालाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईं फ्रान्चाइजी किन्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने प्राय: अवस्थित मोडेलमा केहि समायोजन गर्न आवश्यक पर्दछ। यो कुनै पनि सानो विस्तार, विशिष्टता को अतिरिक्त हुन सक्छ, जुन तपाईंको क्षेत्रको मात्र विशेषता हो। यसले ग्राहकहरूको अझ ठूलो प्रवाह प्रदान गर्दछ र यस्तो तत्व विज्ञापन अभियानको भागको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक पटक तपाईंले फ्रान्चाइजी किन्ने निर्णय गरिसक्नु भएपछि, तपाईंले तुरुन्तै कार्य गर्न आवश्यक पर्दछ ताकि लगानीको भुक्तानी हुनेछ। फ्रान्चाइजी पनि अक्सर ट्रेडमार्क पट्टाको एक रूप हुन सक्छ। एक नियमको रूपमा, फ्रान्चाइजर र फ्रान्चाइजी बीच एक विशेष सम्झौता तैयार छ। यो फ्रान्चाइजी कसरी खरीद गर्ने भन्ने प्रक्रिया हो। तपाईं कार्यालय कामको कार्यान्वयनमा सम्झौता द्वारा निर्देशित हुनुहुन्छ र तपाईंको व्यवसाय माथि हुँदै गइरहेको छ।
हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईलाई त्यस्तै फ्रान्चाइजी किन्नुहोस् जुन तपाईंलाई रुचि छ र जुन तपाईं उत्पादक रूपमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, साथ साथै तपाईंको लगानीबाट अधिक लाभ लिनुहोस्। फ्रान्चाइजरले तपाईबाट रोयल्टीहरू लिन्छन् उनीहरूको ट्रेडमार्क वा जान्ने-कसरी प्रयोगको लागि। साथै, कच्चा माल को आपूर्ति प्राय: अनुबन्ध मा प्रदान गरीन्छ। प्रक्रिया घटक, कर्मचारी प्रशिक्षण, यी सबै करारमा सामेल छन्। यो पर्याप्त सही खरीद गर्नका लागि पर्याप्त छ। तपाईं विक्रेताबाट तपाईंलाई पठाइएको सबै ज्ञात तरिकाहरूको शोषण गर्न मताधिकार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। उत्पाद ब्रान्डको प्रयोगका सर्तहरू पनि व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गरिन्छ। तिनीहरू दुबै स्वतन्त्र र कडा हुन सक्छन्, यो सबै कुरामा निर्भर गर्दछ जुन दुबै पक्षले पछ्याएको लक्ष्यहरूमा। फ्रान्चाइजीले योजनाको उपयोग गर्ने बित्तिकै कारोबार गर्ने अधिकार दिईएको रकम तिर्ने गर्छ। तपाईं ब्रान्ड अपरेट गर्नको लागि अधिकार मात्र किन्न सक्नुहुनेछ तर साथै सबै अतिरिक्त ज्ञान, प्रविधि, र श्रोतहरूको प्रकारहरू जुन तपाईंलाई सैन्य अपरेशनहरूको बेला आवश्यक पर्दछ।
फ्रान्चाइजी स्टोर एक प्रकारको प्लेटफर्म हो जहाँ विभिन्न शहर वा देश खोल्नको लागि विभिन्न ब्रान्ड अफरहरू उनीहरूको शाखामा राखिन्छन्। यस्तो पसल व्यक्तिले आफ्नै व्यवसाय विकास गर्न खोज्नेहरू द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो पसल हालको ढाँचामा विभिन्न प्रस्तावहरूको एक ठूलो संख्याको उपस्थिति द्वारा विशेषता हो। यदि तपाईं फ्रान्चाइजीमा रूचि राख्नुहुन्छ भने, यो विशेष ढाँचा पसलमा हो कि तपाईंले उनीहरूलाई खोज्नु पर्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि यस्तो स्टोरसँग प्रासंगिक प्रस्तावहरूको आवश्यक संख्या छ, अन्यथा, त्यहाँ कुनै कुरा छैन। फ्रन्चाइजीहरू र उनीहरूको विवरणलाई उचित ध्यान दिनुपर्दछ, र स्टोरले अवसर प्राप्त गर्न चाहने मानिसहरूलाई अवस्थित योजना अनुसार केही व्यवसायिक गतिविधिहरू गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्षम छ।
फ्रान्चाइजी एक निश्चित प्रक्रिया वा विभिन्न तत्वहरूको सम्पूर्ण सेट हो जुन खरिदकर्ताले आफैंमा अनइन्डिंग गर्न र प्रचार गर्नको लागि प्राप्त गर्दछ। उही समयमा, फ्रान्चाइजी बेचेको कम्पनीले आफैलाई मद्दत गर्दछ। यस्तो सामान राखिएको ठाउँमा पसल प्रयोग गर्न यो धेरै सुविधाजनक छ कि तपाईं सबैभन्दा उपयुक्त छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, एक लगानीकर्ता को वित्तीय संसाधन को कब्जा को आवश्यकता छ र एक निश्चित ब्रान्ड को शोषण गर्न चाहान्छ जुन विश्वभर मा पहिले नै परिचित छ। लगानीकर्ता केवल पसलमा जान्छ र उत्पाद छान्छ जुन उसलाई उत्तम लाग्छ। यदि त्यस्ता स्टोरसँग फ्रान्चाइजीको विस्तृत विवरण छ भने, तपाईं स्थानमा तुरून्त निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। सर्तहरू प्राय: व्यक्तिगत रूपमा छलफल गरिन्छ, र जब फ्रन्चाइजी खरीददारले स्टोर भित्र मात्र खरीद गर्दछ, प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो एक शर्त हो कि उपभोक्ताले तिनीहरू मध्ये सबै भन्दा राम्रो छनौट गर्न सक्दछ।
एक आधुनिक स्टोर निर्दोष कार्य गर्नु पर्छ, किनकि यो धेरै गम्भीर व्यवसाय हो। धेरै कम्पनीहरू जो छिमेकी बजारहरू प्रविष्ट गर्न चाहन्छन् यस स्टोरमा फेला पार्न सक्षम छन्। तपाईं मनपराउने कुनै फ्रान्चाइजी पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं यो जस्तो डिपोमा जानुहुन्छ। यो धेरै सुविधाजनक छ किनकि सबै आवश्यक जानकारी एक साइटमा प्रदान गरिएको छ। एउटा प्लेटफर्ममा सबै फ्रान्चाइजीहरूको एकीकरण बिल्कुल डिपो हुन्छ जुन आवश्यकताहरूको सेटको सर्तमा सबैभन्दा उपयुक्त उत्पादनहरू खरीद गर्न अवसर प्रदान गर्दछ। यदि तपाईंलाई डिपो चाहिएको छ भने त्यस्तो साइट इन्टरनेटमा फेला पार्न सकिन्छ। यसबाहेक, राम्रो स्टोर, अधिक फ्रन्चाइजीहरू छन्। ठूलो संख्यामा प्रस्तावहरूले सहि छनौट गर्न राम्रो अवसर दिन्छ।
फ्रेंचाइजीको विस्तृत विवरणले तपाईंलाई यो बुझ्नको लागि मद्दत गर्दछ कि यसले तपाईंको प्राथमिकतालाई सूट गर्छ र यो विशेष क्षेत्रमा प्रचार गर्न सम्भव छ कि छैन। स्टोर भित्र, तपाईं विभिन्न विकल्पहरूको तुलना गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। नतिजाको रूपमा, यो एक उत्तम छनौट गर्न सम्भव छ। विशेषाधिकार प्राप्त स्टोरलाई धन्यवाद, व्यवसायिकहरू जसले वित्तीय संसाधनहरू लगानी गर्न चाहन्छन् र अवस्थित र प्रसिद्ध ब्रान्ड प्रयोग गर्दछन् जुन उनीहरूको योजनाहरू छिटो र सक्षमताका साथ लागू गर्न सक्षम छन्। सही फ्रन्चाइजी पाउनका लागि सजिलो नेभिगेशन हुनु पर्छ। यस्तो स्टोर इन्टरनेटमा संचालित हुन्छ, र त्यसमा राखिएका ती ब्रान्डहरूको प्रतिष्ठा यसको स्थिरता र सुरक्षामा निर्भर गर्दछ। स्वाभाविक रूपमा, त्यस्ता डिपोसँग सबै सुरक्षा आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्दछ र आवश्यक प्रमाणपत्रहरू हुनुपर्दछ। एक आधुनिक डिपोले जहिले पनि प्रस्ताव गर्दछ उत्पादनहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी प्रदान गर्नुपर्दछ। फ्रेंचाइजी स्टोर अपवाद छैन किनभने यसले आधुनिक सर्तहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्नै पर्दछ। यस्तो प्लेटफर्मलाई धन्यवाद, तपाईं प्रभावकारी रूपमा विभिन्न ब्रान्डका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रन्चाइजी स्टोर राम्रोसँग डिजाइन गरिएको छ भने कुराकानी गर्न यो पनि सम्भव छ।
फ्रान्चाइजी स्टोर छनौट गर्दा, मुख्य कुरा गल्ती गर्नु हुँदैन, किनकि यो एक महत्त्वपूर्ण व्यापार परिचालन हो, किनकि लगानीकर्ताले त्यो क्षेत्र छनौट गर्दछ जहाँ उसले नगदी स्रोतहरू लगानी गर्नेछ। फ्रेंचाइजी स्टोरले कसैलाई विविध प्रस्तावहरूको एक प्रभावी सेटको साथ प्रदान गर्दछ। फ्रान्चाइजीहरू क्षेत्रीय विवरणहरूलाई ध्यानमा राखेर अनुकूलन गर्न सकिन्छ। प्राय: यो मात्र आवश्यक हुन्छ र विक्रेताले क्रेतालाई कस्ता सर्तहरू प्रदान गर्दछ त्यसको विस्तृत वर्णन स्टोर भित्रै उपलब्ध हुनुपर्दछ। त्यस्ता उपायहरूले सम्भावित व्यवसायीलाई जो फ्रान्चाइजीमा संलग्न हुन चाहान्छन् त्यस्तो योजनामा सही निर्णय लिन सहयोग गर्दछ।
फ्रेंचाइजी क्याटलग एक अवस्थित प्रसिद्ध ब्रान्डको आधारमा हालको व्यवसाय विकास प्रस्तावहरूको सूची हो। यस्तो डाइरेक्टरी एक व्यापारीले प्रयोग गर्न सक्दछ जो वित्तीय संसाधनहरू लगानी गर्न चाहन्छ र एकै समयमा स्क्र्याचबाट व्यवसाय विकास गर्न चाहँदैन। क्याटलग यस्तो व्यक्तिको लागि आदर्श हो। बजार मा हरेक फ्रेंचाइजी यहाँ सूचीबद्ध छ। यस्तो क्याटलगलाई धन्यवाद, सबै भन्दा मनपर्दो र सबै भन्दा उपयुक्त कोठा छनौट गर्न यो सम्भव छ। यस्तो सूचीले छिटो विक्रेतालाई सम्पर्क गर्न र चासोको प्रश्नहरू सोध्न पनि सम्भव बनाउँदछ। फ्रेंचाइजी ह्यान्डबुकको रूपरेखा भित्र, सबै सम्बन्धित प्रस्तावहरू मात्र प्रस्तुत गर्नु पर्दैन, तर यस प्रकारको उत्पादनको विवरण पनि अवस्थित हुनुपर्दछ। विवरणलाई धन्यवाद, सबै भन्दा सहि र सक्षम व्यवस्थापन निर्णय गर्न यो सम्भव छ। तपाईं केवल फ्रन्चाइजीको क्याटलग बिना गर्न सक्नुहुन्न यदि सम्भावित ग्राहकले सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्न चाहन्छ भने।
कुन फ्रान्चाइजी क्याटलग नि: शुल्क वा भुक्तान गर्न सकिन्छ साइटको मालिकमा निर्भर गर्दछ। एकै साथ, फ्रान्चाइजरहरू आफैंले त्यस्ता साइट वा अन्य प्रसारित जानकारी उपकरणमा पोष्टिंगको सम्भावनाको लागि भुक्तान गर्छन्। फ्रेंचाइजी पुस्तिकाका लागि धन्यबाद, यो नयाँ खरीददारहरूलाई आकर्षित गर्न सम्भव छ। फ्रान्चाइजीको खरीददारलाई फ्रान्चाइजी भनिन्छ। उसले उपभोक्तालाई प्रदान गरिएको अवस्थित योजना अनुसार व्यवसाय गर्ने अवसर पाउँदछ। यो योजना फ्रान्चाइजर द्वारा विकसित गरिएको थियो, जबकि फ्रान्चाइजी आफैंमा सबै आवश्यक तयारी लागत, लन्च, र व्यापार वस्तुको परिचालन गतिविधिहरू वहन गर्दछ। यो ती व्यक्तिहरूका लागि सुविधाजनक छ जोसँग वित्तीय संसाधन लगानी गर्ने अवसर छ तर केही नयाँ आविष्कार गर्न चाहँदैनन्। तिनीहरू एक रेडीमेड फ्रेंचाइजी लिन्छन्, जुन उनीहरूको लागि धेरै सुविधाजनक छ। अर्कोतर्फ, क्याटलगले तपाईंलाई तपाईंको छनौट गर्न मद्दत गर्दछ, सबै भन्दा सही व्यवस्थापन निर्णय गर्न, र लगानी गरिएको कोषबाट अधिकतम आय प्राप्त गर्दछ।
फ्रेंचाइजी क्याटलग भित्र, तपाई एकल भुक्तानी को आकार निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो फ्रान्चाइजीको मान हो, जुन स्थिर हो र फ्रान्चाइजरले फ्रान्चाइजीबाट प्रारम्भिक चरणमा प्राप्त गर्दछ। यो कूल सुरु हुने लागतको करीव १०% हुन सक्छ। एकै साथ फ्रान्चाइजी ह्यान्डबुकको रूपरेखा भित्र, तपाईले विवरणहरू निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुनेछ जुन अन्तर्क्रियाका सर्तहरूलाई अझ विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछ। उदाहरण को लागी, एक तथाकथित व्यापार पुस्तक एक बोनस को रूप मा प्रदान गर्न सकिन्छ। यो एक प्रभावकारी मस्यौदा नियम भन्दा बढी केहि छैन कि सबै भन्दा कुशल तरीकाले गतिविधिहरूको संगठन स्वीकार गर्दछ। समान अपरेशन कर्पोरेट पहिचान निर्माण, विज्ञापन सुरूवात, र उपभोक्ताहरूसँग अन्तर्क्रियामा सम्बन्धित अन्य अपरेशनहरूको लागि हो। तथाकथित ब्रान्ड पुस्तकले तपाईंलाई सम्भावित ग्राहकहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने ठीक तरिकाले नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ। केवल फ्रेंचाइजी क्याटलगको फ्रेमवर्क भित्र, यी तत्वहरू विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुपर्दछ र यसले सम्भावित ग्राहकलाई सही निर्णय लिन मद्दत गर्दछ।
यदि फ्रेंचाइजीहरूको क्याटलग अप-टु-डेट छ, तब यसले सबै हालका प्रस्तावहरू सूचीबद्ध गर्दछ र सम्भावित ग्राहकहरूले उनीहरूमध्ये सबै भन्दा राम्रो फेला पार्न सक्दछन्। त्यस्तै क्याटलगले अधिक फ्रान्चाइजीहरू बेच्न अनुमति दिन्छ किनकि तिनीहरू सबै एकल साइटमा अवस्थित छन्। क्याटलग राम्रोसँग डिजाइन र राम्रोसँग हुनुपर्दछ। त्यस्ता उपायहरूले नेभिगेसनलाई सजिलो बनाउँदछन् र क्याटलगको उपयोगलाई ग्राहक मार्गको लागि सब भन्दा कुशल र रमाईलो बनाउँदछ। यदि तपाईंलाई एक क्याटलग चाहिन्छ भने, यसलाई कुशलता र दक्षतासाथ कम्पाइल गर्नु उत्तम हुन्छ। फ्रान्चाइजीहरूलाई उनीहरूको वर्णनमा कुनै भौतिक त्रुटिहरू उत्पन्न नहोस् भनेर सुनिश्चित गर्न आवश्यक ध्यान दिनुपर्दछ। फ्रेंचाइजीको क्याटलगलाई धन्यवाद, धेरै सम्भावित ग्राहकहरू उनीहरूको विक्रेताहरू फेला पार्न सक्षम छन् र व्यापारको विकास सुरु हुनेछ, र सबै नयाँ शाखाहरू छिमेकी शहरहरू र देशहरूमा खुल्नेछन्।
सबै भन्दा उपयुक्त समाधान खोज्नको लागि प्रभावी फ्रेंचाइजी क्याटलग प्रयोगकर्तालाई सुविधाजनक नेभिगेसनसँग सुसज्जित हुनुपर्छ। फ्रेंचाइजी पुस्तिकाका लागि धन्यबाद हरेक उपभोक्ताले कुनै पनि लिपिक अपरेशनहरूसँग डिल गर्न सक्षम छन् सूचना पाउनका लागि तिनीहरूलाई उत्तम उपयुक्त।
फ्रेंचाइजी व्यवसाय विक्रेता द्वारा प्रदान गरिएको नियम अन्तर्गत पदोन्नति हुनुपर्दछ। विक्रेतालाई अन्यथा फ्रान्चाइजर भनिन्छ र यो कसरी फरक वा ज्ञात वा ट्रेडमार्कको शोषण गर्ने अधिकारको लागि भिन्न छ, उसले तथाकथित फ्रेंचाइजीबाट निश्चित रकम प्राप्त गर्दछ। उही, बदलेमा, योगदान भुक्तान गर्न बाध्य छ, जुन प्रदान गरिएको योजना प्रयोग गरेर व्यवसाय संचालन गर्ने अधिकारको लागि स्थानान्तरण गरियो। यो योजना फ्रेंचाइजरका प्रतिनिधिहरू द्वारा विकसित गरिएको हो, जबकि यस व्यवसायको शुरुवात र तयारीको सबै लागतहरू आफैंले नै वहन गर्छन।
अर्कोतर्फ फ्रान्चाइजी एक कुशलतापूर्वक कार्य गर्ने प्रणाली हो जसले सबै प्रक्रियाहरू, सर्तहरू, र पक्षहरू विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछ, जसले व्यापारलाई सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ। उही समयमा, व्यवसाय गर्ने प्रक्रिया फ्रान्चाइजरको अनुरोधको कडाईका साथ पालना गर्नुपर्दछ। यो तब हो कि फ्रन्चाइजी सकेसम्म प्रभावकारी हुन्छ, र व्यापारलाई ध्यानको आवश्यक मात्रा दिइएको हुन्छ। सबैभन्दा सफल उद्यमीहरू क्लिरिकल अपरेशन्सको प्रतिलिपि गर्न सक्षम छन्, र ती मध्ये केहीले उनीहरूको सुधारहरू पनि गरे। प्रत्येक अपरेशन र परिवर्तनहरू पनि विक्रेताको साथ छलफल गरिन्छ, किनकि यी नियमहरू हुन्।
सम्झौताको समाप्ति पछि, यो फ्रन्चाइजी प्रयोग गरेर व्यवसाय सुरु गर्न सम्भव छ। त्यस्ता उपायहरूले उपभोक्तालाई लगानीमा चाँडै नै नाफा कमाउन मद्दत गर्दछ किनकि फ्रेंचाइजी एउटा अवस्थित, राम्रो विकसित र प्रमाणित मोडेलमा वित्तीय स्रोतहरूको लगानी बाहेक अरू केही होइन। यस व्यवसाय मोडेलले क्षेत्रीय विवरणहरूलाई ध्यानमा राख्दै कुशलतापूर्वक कार्यालय संचालनहरू गर्न अनुमति दिन्छ। कहिलेकाँही फ्रेंचाइजीले काम गर्दैन यदि व्यापार प्रक्रियाहरू गलत रूपमा निर्माण गरिएको छ वा वरपरका ठाउँहरू परियोजनाको मातृभूमिमा भएको एकसँग मेल खाँदैनन्।
तपाईका शहरहरूको सडकमा प्रत्येक दिन एक फ्रान्चाइजी व्यवसाय देख्न सकिन्छ। यो कुनै पनि क्याफे, पसल, नाई पसल, वा अन्य संगठन हुन सक्छ। यहाँसम्म कि म्याकडोनाल्ड र केएफसी फ्रन्चाइजीहरू हुन् जसले लोकप्रियताको उच्च स्तरहरू। सबै एउटा फ्रान्चाइजी खोल्ने र योजना पछ्याई व्यवसाय कार्य गर्ने सम्झौतामा तोकिएको छ। सम्झौता सबै विवादहरू विनियमित गर्न निष्कर्षमा पुग्छ र प्रत्येक पक्षलाई उनीहरूको अधिकार र दायित्व थाहा हुन्छ। यदि तपाईं फ्रान्चाइजी व्यवसाय चलाउन जाँदै हुनुहुन्छ भने, यो सब भन्दा उपयुक्त प्रकारको व्यवसाय रोज्न लायक छ। साथै, तपाईको क्षेत्रमा गतिविधिहरूको ब्यबस्थालाई ध्यानमा राख्नु अविश्वसनीय रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणको रूपमा, हामी रसियामा म्याकडोनाल्डले पेनकेक्सको बिक्रीलाई विचार गर्न सक्छौं। फ्रान्चाइजी व्यवसाय चलाउनको लागि आधुनिक अवसरले स्वतन्त्र वित्तीय संसाधन भएका र उनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लगानी गर्न चाहेको व्यक्तिलाई सफलताको असीमित संभावना दिन्छ। यस किसिमको व्यवसाय स्क्र्याचबाट ब्रान्ड प्रमोशन भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। एक निश्चित उद्यमीले पहिले नै यस्तो मोडलको विकास गर्न सकेका छन् र निश्चित प्रतिशतको लागि आफ्नो अनुभव साझा गर्छन्। यो धेरै सुविधाजनक छ किनकि फ्रान्चाइजी व्यवसायले तपाईंलाई उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्दछ केहि नयाँ आविष्कार नगर्न, तर अवस्थित सफल विकल्प प्रयोग गर्न। यस्तो व्यवसाय निश्चित रूपमा प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्दछ यदि सबै उत्पादन कार्यहरू सम्झौतामा तोकिए बमोजिमका नियमहरू बमोजिम गरिन्छ। फ्रेंचाइजी व्यवसाय एक द्रुत गतिमा विकसित हुनेछ यदि विक्रेतासँग सहमत भयो भने, जसले क्षेत्रीय विवरणहरूलाई ध्यानमा राख्नेछ।
जो कोही फ्रान्चाइजी व्यवसाय सुरू गर्न चाहान्छन्, विशेष साइट, क्याटलग, वा स्टोर आवश्यक छ, जहाँ बजारमा सबै वर्तमान प्रस्तावहरू प्रदान गरिएको छ। यस्तो सूचीको मद्दतले, तपाईं सजिलैसँग सबै भन्दा उपयुक्त विकल्प छान्न सक्नुहुन्छ। एक फ्रान्चाइजी व्यवसाय संग काम गर्नुहोस्, सबै भन्दा उपयुक्त दिशा छनौट गर्नुहोस् जसमा तपाईं हातैले कार्यलाई प्रभावी ढंगले सामना गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेंचाइजी व्यवसायलाई मात्र धन्यवाद, धेरै व्यक्तिले आफ्नो प्रारम्भिक पूंजीमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेका छन्। फ्रान्चाइजी व्यवसायमा लगानी गरेपछि, तपाईले उच्च आयको आशा गर्न सक्नुहुन्छ। यस लगानीमा प्रतिफल सामान्यतया धेरै बढी हुन्छ। यो के हो जुन यस प्रकारको व्यवसायको उच्च स्तरको लोकप्रियता सुनिश्चित गर्दछ। धेरै व्यक्तिहरू केवल वित्तीय स्रोतहरू एक मोडलमा लगानी गर्न चाहन्छन् जुन बर्षहरूमा परीक्षण र परिष्कृत भइसकेको छ।
तपाईका साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् वा यस पृष्ठको ठेगाना आफैं बचत गर्नुहोस्
एक मताधिकार किन्नुहोस्
Youtube समाचार च्यानल
यदि तपाइँ एक टाइपो देख्नुहुन्छ, यसलाई सही गर्न को लागी, माउस संग गलत पाठ चयन गर्नुहोस् र इन्टर कुञ्जी थिच्नुहोस्
यदि तपाइँ एक टाइपो देख्नुहुन्छ, यसलाई सही गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्